WATERPOINT → Disenser yemvura • Vakanwa • cosmetal • Elkay Polska
Inonaka - yakachipa
mvura kumba uye muhofisi
Ona zvigadzirwa zvedu
Munhu agara achibatanidzwa mvurahupenyu hwakatenderedza kutenderedza zviwanikwa, masango emunhu neese maficha ehupenyu akamuka. Nhasi miedzo kugadzirwa kwemvura uye kugovera ivo vanoperekedzwa nemichina yakaoma uye matekiniki maitiro.
Kambani yedu, Water point wanga uchishanda pamusika kubva 2004.
Isu tisu takasununguka kugovera kwePoland yevatungamiriri venyika muindasitiri.
Parizvino tiri kutengesa zvigadzirwa zvemakambani: Acuva - UV mwenje mwenje, Zvinodhaka - mvura inodzima, Elkay - vanonwa doro uye matsime emvura, Metalco - diki yekuvaka, Muimbi Valve - mutungamiri mumunda wekutarisa zvakatipoteredza, zviyero (semuenzaniso kuyerera, kumanikidza), kurekodha data uye kudzora kwenzvimbo yekupa mvura (semuenzaniso. kudzikisa mavharuvhu).
Isu tinokukokaiwo kuti muzvidzidzise nedzimwe mhando dzedu: AkasIna.com uye XNUMXLash.pl
kambani Acuva rakaumbwa muna 2014. Chinangwa chayo kugadzirisa matambudziko azvino, kukurira zvipingamupinyi uye kutarisana nematambudziko matsva mukupa yakachena mvura yekunwa. Iyo inonyanya kugadzirisa mvura disinfection masisitimu panguva yekushandisa, pamwe nemamo modular ekushandisa. Parizvino, ese masisitimu eAcuva anoedzwa uye anoitwa panenge pamakondinendi ese kutenderera pasirese.
Acuva Technologies Inc. mutungamiri wenyika mune tekinoroji UV-LED mvura disinfection. Ivo vanogadzira, vanogadzira uye vanogadzira epamberi UV-LED masisitimu echizvino uye anoshanda emvura disinfection. Chinangwa chekambani ndechekupa mukana wekuwana yakachengeteka, yakachena mvura yekunwa kune vanhu kutenderera pasirese, nekudaro ichivimbisa hupenyu hwepamusoro kwavari.
Zvinodhaka yakavambwa muna 1951 semhuri yemhuri semisangano yekugadzira masimbi uye kugadzira zvikamu zveindasitiri yemagetsi.
Mumakore anotevera, kugadzirwa kunowedzerwa ne zvigadzirwa zvefriji uye pahwaro hwadzo, anotanga kugadzira mvura inodzima.
Parizvino, inogadzira michina yakawanda yemhando iyi, yemhando yepamusoro, zvigadzirwa zvemazuva ano zvehunyanzvi uye zvechimanje, zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro, zvichisimbisa vatengi makore mazhinji ekushandisa.
Zvigadzirwa zvemafuta zvinotengeswa kune nyika dzakawanda pasi rese uye zvinokosheswa nekuda kwemhando dzadzo.
kambani Elkay yakavambwa muna 1920 mudunhu rekuchamhembe kweChicago sebasa diki.
Kubva ipapo, ave achiramba achishanda kugadzirwa vanonwa doro uye spas dzemvurapamakore, zvichiratidza kuve nehanya kwedu kwepamusoro-soro mhando uye mwero.
Izvozvi zviripo mutungamiri wepasi rese mumusika uyu, inogara ichikura iyo inopa kune vanogamuchira, vanogara vachikurisa nemhando dzakagadzirirwa neazvino zvigadzirwa zvounyanzvi zvigadziriso, zvakadai se: isina-yekubata sevhisi, Green Tricker counter, nezvimwe.
Metalco iyo inopfekedza chimiro uye inoramba ichiratidzira maitiro ekugadzira ayo akatanga nekutanga kwayo muna 1984.
Nhasi uno ndomumwe wevakakura vanogadzira idiki yemaguta ekuvakwa munyika.
Metalco zvinoreva Chimironekuti chimiro mune zvese zvigadzirwa uye zvese zvinogadzirisa zvinoita kuti Metalco isiyane neayo Yakagadzirwa Nhoroondo, mune yazvino zvigadzirwa zvigadzirwa. Metalco isanganiswa yemutambarakede wakanangana neyekugadziriswa kwezvisikwa.
Kubudirira kwekushambadzira kweMetalco ndiko kukonzera kuenderera mberi kwekutsvaga nekuyedza mukugadzira, zvakare nekuda kwekupa kwevanozivikanwa vekugadzira mapaki uye vagadziri vemukurumbira vekunze, kune zvigadzirwa zvakasikwa uye hunyowani hunyanzvi hwekugadzira.
Muimbi Valve kugadzira uye kugadzira otomatiki kutonga mavharuvhu indasitiri yemvura yepasi rose.
Kubva 1957, mutyairi wendege akashanda mavhavha ekudhiraivhi akaiswa pane dzinenge nyika dzese dzakatenderedza pasi.
Kunyangwe iri kudzora kurasikirwa kwemvura muSoutheast Asia, nyaya dzekudzivirira mvura dzeSaudi Arabia, kana zvinodiwa nehurumende dzemumahofisi eUS, tinopa mhinduro dzemvura kuhurumende, maguta, mabhizinesi pamwe nemakontrakta pasi rese .
Zvizhinji zvezvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa zvakazvarwa kunze kwechishuwo chishuwo chekugadzirisa dambudziko rekushandisa.
Dambudziko rauya, timu yedu yevanyanzvi mune zvemagetsi, mashandisirwo uye mavharuvhu ekutonga haadzoreki mukutsvagisa kwavo uye dhizaini kusvikira mhinduro yawanikwa.
Ona iyo Muimbi maficha >>
Mudziyo wemvura yegassing
Vanopa mvura vanopenya vari kuwedzera kuonekera mumakambani, mahofisi uye kunyangwe dzimba dzevanhu. Chino chazvino chemvura inopetwa ...
Kunwa mabhodhoro emvura
Yedu yekupa inosanganisira kunwa vanonwa mvura yefundo, yeiyo HoReCa indasitiri, hutano hwehutano, imba, mahofisi, zvivakwa zveveruzhinji, mapaki, zvivakwa ...
Kudzvinyirirwa kwemvura kuderedza
Kudzvinyirirwa kwemvura kuderedza, mutemo pamwe nefirita uye nekumanikidza kwegeji. Shanduko yemvura inoshanduka inoitika mugetsi yemvura kazhinji inoguma iri, pakati pevamwe, ...